Lavaka mainty - Wikipedia
Manova an'i Lavaka mainty
Sary namboarin'ny lavaka maintin-kintana folo kilometatra vitsivitsy miala ny afovoany. Ny sary miverimberina akaikin'ny faribolana mainty dia vokatry ny lojin-kerim-panintonana (gravitational lens) noho ny herim-panintonan'ny lavaka mainty rehefa manakaiky azy.
Amin'ny fizikan-kainkintana, ny lavaka mainty dia zavatra ara-kainkintana hakitroka avo ka mahatonga ny zavatra rehetra, hatramin'ny hazavana, ho gadra tsy afaka miala amin'ilay zavatra. Ny zavatra toa izany dia tsy tsy afaka mandefa na mitaratra hazavana, ka atao hoe mainty, izany hoe tsy hita maso.
Fiorenan'ny lavaka mainty[hanova | hanova ny fango]
Ny lavaka maintsy dia afaka miorina amin'ny alalan'ny fomba andro. Ny atao hoe lavaka maintin-kintana (stellar black holes) dia avy amin'ny lavaka mainty milanja 3,3 lanjamasoandro (fetran'i Oppenheimer), ny lavaka maintim-bondronkintana dia milanja tapitrisa maro hatramin'ny lavitrisa maro lanjamasoandro, izy ireo matetika dia hita eny amin'ny faritra afovoan'ny vondron-kintana. Ny fiavian'ny lavaka maintim-bondronkintana dia heverina fa tany am-piandohan'izao rehetra izao. Ny lavaka mainty mielanelan-danja dia manan-danja 100 hatramin'ny 10.000 lanjamasoandro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavaka_mainty&oldid=996459"
Voaova farany tamin'ny 17 Aogositra 2020 amin'ny 04:50 ity pejy ity.